China KF900A Portable Intelligent IEC61850 IEDs Analyzer Test abakhiqizi nabaphakeli | Kingsine
Gxila Ekuhloleni Nokukala Amandla Kagesi
Intelligent Relay Test Setha
Isethi Yokuhlolwa Kwe-Protection Relay
I-Multifunctional Power Meter
Ithuluzi lokuhlola elibanzi liyathuthuka ngokusekelwe ekuhlolweni kwesiteshi esincane esihlakaniphile, ngokuyinhloko umsebenzi wokuhlola i-relay yokuvikela, ukuhlaziya inani lamasampula, ukuhlaziya/ukuqhathanisa ifayela le-SCD kanye nesevisi ye-MMS. Ifanele ukutholwa nokuhlolwa kwemishini ye-IED efana ne-intelligent substation protection relay, ukulinganisa nokulawula idivayisi, iyunithi yokuhlanganisa kanye netheminali ehlakaniphile. Futhi ingasetshenziswa ekuhloleni isignali yesendlalelo sokulawula isiteshi esingaphansi.
Isisindo esincane: <2.75kg
Ukusebenza kwesikrini sokuthinta esigcwele
Ibhethri ye-lithium eyakhelwe ngaphakathi, enosayizi omncane, isisindo esincane, ukusebenza kwesikrini sokuthinta esigcwele se-LCD, imisebenzi yokuhlola enamandla, njll., ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokuhlolwa okuhlanganyelwe kwesistimu, ukufakwa nokugunyazwa, ukusebenza nokugcinwa nokuqeqeshwa kwamakhono isiteshi esincane esihlakaniphile.
I-KF900A incazelo entsha yesihloli sokuvikela i-relay yedijithali, futhi iletha ulwazi olusha lokusebenza kubasebenzisi.
Umhloli omncane wedijithali we-relay tester, isikrini se-LCD esingu-10.4 inch high-definition capacitive, wonke umshini wokusebenza kwesikrini sokuthinta esigcwele;
Umsebenzi wokuhlola odluliselwe emhlabeni wonke wokuvikela, Ngokusebenza ngokugcwele kokuhlola okwenziwa mathupha, isilandeleli sesimo, iHarmonic, ukuhlolwa kokuvala kabusha, Ukuhluka komugqa, Ibanga, ibanga eliguqukayo, i-Overcurrent, i-Zero sequencer, Ramping, isiqondiso samandla, Izinga Lomehluko, I-Differential Harmonic, Ukuvikelwa kwe-overexcitation, Vumelanisa, Ukuhlola kokunikezwa kwamandla, umehluko we-Busbar, ukuhlolwa kwe-Frequency, ukuhlolwa kwe-Dv/Df, njll.
Ngomsebenzi wesevisi ye-MMS yokuxhumana, inani lesampula lokuqapha ngesikhathi sangempela, okokufaka/okuphumayo kanambambili, umcimbi oyisixwayiso wokudluliselwa kokuvikela kanye nedivayisi yokulinganisa nokulawula. Ukusekela ukulungiselelwa kokudluliselwa kokuvikela ukufundwa ku-inthanethi, shintsha futhi uhlele ukushintsha kwendawo. Ipuleti lokudlulisa elisekelayo livumela/cisha, vula/cisha.
Ngomsebenzi wokuhlola okuzenzakalelayo wesekethe yesibili yesifunda, Ngokuthumela umlayezo we-SV ne-GOOSE, nokuthola impendulo ye-MMS eyakha iluphu evaliwe, thola ukuhlolwa okuzenzakalelayo kwamatheminali abonakalayo;
Isekela ukuhlola ukungaguquguquki kwamafayela emodeli yedivayisi ye-IED. Thola imodeli yedivayisi ye-IED ku-inthanethi nge-MMS, uyiqhathanise nefayela lemodeli le-SCD lendawo, futhi uthole umphumela wokufana wemodeli;
Ngomsebenzi wokuhlola ungqimba ongemuva nowesiteshi sokulawula, ngokungenisa ifayela le-SCD, ingalingisa idivayisi yokuvikela, ukulinganisa nokulawula ukuthumela isignali yesilinganiso sesilawuli kude, isignali yesilawuli kude namanye amasignali, ifinyelele inethiwekhi yesilawuli sesiteshi ngephrothokholi ye-MMS, ixhumane nesizinda. kanye nedivayisi ekude, elula futhi esheshayo icupha zonke izehlakalo ze-alamu, ishintsha isimo sokushintsha IVULIWE noma IVALIWE, kanye namanani amanje, amandla kagesi, namandla ukuze kuzuzwe ukuhlolwa kokukhomba iphuzu ngesizinda sokuqapha noma isiteshi esikhulu;
Ukusekela ukungenisa ithebula lephoyinti le-Excel le-substation, thola ukucushwa kwemephu yesiteshi yesignali yesilinganiso esikude nesilawuli esikude ngefayela le-SCD, ukukhiqiza ngokuzenzakalelayo ithebula lephoyinti lesignali yesiteshi, futhi udlulise ngokuqondile isignali yesilinganiso esikude nesilawuli esikude ngokusho kwenombolo yephoyinti;
Nge-SV, umsebenzi wokuqapha umlayezo we-GOOSE. Ukuboniswa kwesikhathi sangempela kobukhulu benani lesampula le-SV, isigaba, imvamisa, i-waveform, i-vector kanye nekhodi yomthombo womlayezo, isibonisi sesikhathi sangempela isimo setheminali ye-GOOSE kanye nekhodi yomthombo womlayezo, rekhoda itheminali ngayinye ebonakalayo ngokuhamba kwesikhathi futhi uhlole indlela yokudlulisa umlayezo we-GOOSE;
Isekela ukulibaziseka kokudlulisela, ubuqotho bomlayezo we-SV, ukunemba kokuphuma kwe-SV, hlanganisa ukuhlakazwa kweyunithi yesikhathi nokulinganisa kokunemba kokugcina isikhathi;
Isekela ukuboniswa kwesithombe kwamafayela e-SCD, ikhombisa ngokusobala ukuxhumana kwedivayisi ye-IED kanye nokuxhunywa kwezihibe zetheminali ebonakalayo; ngomsebenzi wokuqhathanisa ifayela le-SCD, futhi ikhiqize imibiko yokuqhathanisa;
Umamukeli womlayezo wesikhathi sangempela uma kuqhathaniswa nefayela le-SCD ukuze kuzuzwe ukuhlola ukuvumelana kwefayela le-SCD;
Ukusekelwa kwerekhoda kanye nefayela le-PCAP lokuhlaziya ungaxhunyiwe ku-inthanethi, nomsebenzi wokudlala umlayezo we-PCAP.
Sekela umsebenzi wokuthumela we-IRIG-B, ungasetshenziswa njengomthombo wesikhathi, eneziteshi ezi-6 ezihlukanisa isignali ye-fiber IRIG-B.
Ukusekela umsebenzi wokuhlola i-Polarity, ukusekela sebenzisa indlela ye-DC ukuze uhlole i-polarity yokuvikela/i-metering core ye-electromagnetic transformer yamanje kanye ne-electronic transformer yamanje;
Ngomsebenzi wokulinganisa amandla okukhanya, umsebenzi wokuthola isigaba esingekho endaweni, ukunikezwa kwamandla kwebhethri ye-lithium eyakhelwe ngaphakathi, isikhathi sokusebenza singaphezu kwamahora angu-8 ngokuqhubekayo.
I-Fiber Port 8 amapheya, LC uhlobo port, wave-ubude 1310nmElinye lamachweba okukhanya liyimojuli ye-1000M optical ezinikele, elungele amanethiwekhi angu-1000M.
Imbobo ye-Fiber serial 8, imbobo yohlobo lwe-ST, ubude begagasi obungu-850nm6 ukuthumela, 2 ukuthola (Ingasetshenziswa njenge-FT3 noma i-IRIG-B)
Imbobo ye-Ethernet 1,100Base-TX,RJ45
Imbobo ye-USB 1
Imbobo ye-GPS Isiteshi esingu-1, isamukeli sesignali ye-GPS sangaphakathi
Imbobo yokufaka ye-analogi(Ongakukhetha) 4 noma 8 amapheya, 18 bit AD, 40kHz izinga lokusampula, ububanzi bokufaka 0-250VAC
Okokufaka kanambambili othintana naye kanzima Ibhangqa elingu-1, othintana naye ongenalutho oguquguqukayo noma ongathintana naye (30~250V), isikhathi sokuphendula ≤500μs
Okukhiphayo kanambambili othintana kanzima Ipheya elingu-1, uhlobo lokuqoqwa okuvulekile, amandla okuvimba angaphezu kuka-250V, 0.3A (DC), isikhathi sokuphendula ≤ 100μs
Linganisa ukunemba Iphutha lokunemba kwe-voltage nesilinganiso samanje ≤0.05%Ukunemba kwemvamisa kungcono kuno-0.001Hz ebangeni lika-15~1000HzIphutha lokunemba kwesilinganiso ≤0.01°
ukuthumela Ukunemba Iphutha le-voltage nesilinganiso samanje ≤0.05%Ukunemba kwemvamisa kungcono kuno-0.001Hz ebangeni lika-10~1000HzIphutha lokunemba kwesigaba ≤0.01°
Ukusabalalisa okukhiphayo komlayezo we-SV ≤±80ns
Ukubambezeleka kokudluliselwa kwembobo ye-Fiber serial ≤100ns
Ukuvumelanisa okukhiphayo kwe-SV Iphutha lesikhathi phakathi kwembobo ye-Fiber <1μs
Ukunikezwa kwamandla kagesi Iphakethe lebhethri le-lithium elikhulu langaphakathiI-adaptha yamandla: Okokufaka 220VAC/50Hz, -20%~+20%Okukhiphayo DC 15V±10%
Bonisa 10.4 intshi high-definition LCD screen capacitive (isikrini sokuthinta)
Okwedlule: I-K2063i Universal Relay Test Set
Olandelayo: I-KF86 Intelligent Relay Test Set
I-Differential Relay Tester
I-Digital Relay Tester
I-Distance Protection Relay Tester
I-Frequency Protection Relay Tester
I-Protection Relay Tester
I-Protective Relay Tester
Umhloli Wezigaba Ezintathu
I-K3163i Universal Relay Test Set
I-KF932 IEC61850 Relay Tester
Iziteshi eziyi-13 (6x35A & 7x310V) zikhipha i-K3166...
I-KF920 Intelligent Relay Test Set
I-KF86 Intelligent Relay Test Set
Compact 6-isigaba 6x300V voltage okukhiphayo KF85 Univ...
Imikhiqizo efakiwe, Imephu yesayithi,
Edluliselwe Test Setha Supplier, Intelligent Relay Tester, Iyunithi Yokuhlola I-Universal Relay, I-Distance Protection Relay Tester, Ukuhlolwa kwe-Digital Relay, Ikhithi Yokuhlola I-Frequency Relay, Yonke Imikhiqizo